Ahoana no ahafahan'ny marketing amin'ny mailaka ivelany manohana ny tanjonao amin'ny varotra | Martech Zone
Fivarotana entana dia lehibe.
Mamorona atiny ianao.
Mitondra fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao ianao.
Manova ny sasany amin'izany fifamoivoizana izany ianao ary mivarotra ny vokatrao sy ny serivisinao.
Ny tena izy dia sarotra kokoa noho ny hatramin'izay ny fahazoana valiny Google pejy voalohany ary mitondra ny fivezivezena ara-organika.
Mitohy ny fihenan'ny zava-bita voajanahary amin'ny fantsona media sosialy.
Ka raha nahatsikaritra ianao fa tsy ampy intsony ny varotra miditra dia mila omenao azy io fanampiny hahazoana ny valiny aorianao.
Ary eo no miditra ny marketing mailaka ivelany.
Marketing amin'ny mailaka ivelany
Ny marketing amin'ny mailaka ivelany dia ny fanatonana lisitra olona kendrena be izay mety hanampy amin'ny orinasanao.
Tsy ny mailaka mangatsiaka mahazatra anao no andefasanao hafatra mitovy amin'izany amin'ny olona an'arivony. Be pitsiny sy stratejika kokoa noho io.
Miaraka amin'ny tetika sy fitaovana mety, marketing amin'ny mailaka ivelany Mety hahomby amin'ny fampitomboana ny fahitan'ny marika anao ary amin'ny fitarihana fitarihana ho an'ny orinasanao.
Fampiasana fitaovana, toy ny OutreachPlus, izay natao manokana ho an'ny fanentanana amin'ny mailaka dia ahafahanao mandefa mailaka tena manokana amin'ny mpihaino kely iray, hametraka filaharana fanaraha-maso, hanara-maso ny fifandraisana rehetra amin'ny fanantenanao, handrefesana ny valin'ny fampielezan-kevitrao ary maro hafa.
Manome anao topy topimaso avo lenta momba ny zava-bita ny dashboard
Midira amin'ny fitsapana maimaim-poana OutreachPlus 14 Andro
Ankehitriny, andao jerena ny sasany amin'ireo tetika mahomby indrindra azonao ampiasaina amin'ny fivarotana ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fitaovana fanentanana mailaka.
Manamboara rohy hampitombo ny fifamoivoizana.
Ny fampielezan-kevitra amin'ny fananganana rohy dia miasa amin'ny lafiny roa - manampy anao amin'ny fananganana mombamomba ny rohy samihafa izay tena zava-dehibe amin'ny SEO, ary mitondra fifamoivoizana avo lenta mankany amin'ny tranonkalanao izy ireo.
Saingy, hahazoana ireo tombontsoa ireo dia mila mahita fotoana mety amin'ny fananganana rohy ianao, izany hoe ireo tranonkala manana fahefana sy avo lenta izay mifandray akaiky amin'ny lohahevitrao ary manantona azy ireo.
Betsaka ny tetika fananganana rohy, saingy ireto misy vitsivitsy izay tena mandeha tsara:
Rohy fanampiny - Mitadiava lahatsoratra fiderana amin'ny tranokala mifandraika sy rohy fifanakalozana.
Rohy tapaka - Mitadiava rohy tapaka amin'ny tranokalan'ny fahefana avo mampiasa fitaovana toy ny Ahrefs ary mifandraisa amin'izy ireo hanolotra rohy fanoloana.
Rohy momba ny loharanom-pahalalana - Mitadiava pejy loharanom-pahalalana mifandraika ary manolora fanolorana loharanom-pahalalana kalitao izay hanome lanja sy hifanaraka tanteraka amin'ireo loharano sisa amin'ity pejy ity
Ny fananganana rohy dia mety handany fotoana, fa tena sarobidy, noho izany dia mila mandamina miaraka amin'ny fanatrarana anao ianao.
Ampitomboy ny fanatontosana ny atiny tsara indrindra ho anao.
Ny fanelezana ny mailaka dia fomba voaporofo sy mandaitra tokoa amin'ny fampandehanana ny fifamoivoizana sy ny firosoana amin'ny atiny.
Azonao atao ny manatona ireo mitarika eo amin'ny sehatry ny indostriao, bilaogy mifandraika, na koa mpiara-miasa aminy izay mety ho liana amin'ny mpihaino anao ny lohahevitrao. Raha mbola manan-danja tokoa ny atiny, ny fampiroboroboana izany amin'ny alàlan'ny fanentanana dia hanitatra ny fahatongavany ary mety hitondra fitarihana vaovao ho an'ny orinasanao.
Na izany na tsy izany dia mila manana a ianao paikady fampiroboroboana tsara ho an'ny atiny.
Manararaotra ny influencer hanangana ny marikao.
Ny marketing amin'ny Influencer dia mety mahomby. Raha ny marina, tatitra iray no nahita fa ho an'ny isaky ny $ 1 laninao amin'ny marketing influencer dia mahazo $ 6.50 ianao.
Voalohany, mila manamboatra lisitry ny influencer izay mifandraika amin'ny akany sy ny fampielezan-kevitra ataonao ianao, manana fahaiza-mitarika ny mpihaino azy hanao hetsika, ary mety tsara amin'ny marikao. Afaka mora foana ianao mitady ny influencers mety amin'ny GroupHigh.
Azonao atao ny mampakatra ny lisitrao amin'ny fitaovana fanentanana ary manomboka manangana ny fampielezan-kevitrao. Hamarino tsara fa manokana ny mailakao isaky ny influencer tsirairay mba hampitombo ny fahafahanao mahazo valiny.
Fitaovana marketing amin'ny mailaka ivelany dia tsara amin'ny fitantanana ny fizotran'ny asa fivelomana, saingy sarobidy izy ireo amin'ny fitazonana ny rantsan-tànanao amin'ny fakan'ny fifandraisanao amin'ireo influencer rehefa mivoatra izy ireo.
Ampitomboy ny fampahafantarana amin'ny alàlan'ny fanentanana amin'ny haino aman-jery.
Ny fanelezana haino aman-jery dia fomba iray mahomby amin'ny famoahana ny fampiroboroboana sy ny fahitana mila mitombo ny marikao. Ny firesahana amin'ny tranokalan'ny haino aman-jery manampahefana dia manome anao fahatokisana avy amin'ny antoko fahatelo ary mitondra fifamoivoizana mivantana mankany amin'ny tranonkalanao.
Saingy… mila mikendry ireo mpanonta, mpanao gazety ary bilaogera mety ianao, olona izay tena liana amin'ilay tantara apetrakao. Ary izany dia miverina amin'ny maha-zava-dehibe ny fananana lisitry ny fifandraisana kendrena mafy.
Mitadiava olona izay efa nandrakotra tantara mitovy amin'izany fa alao antoka fa manana ny zoro mahaliana sy miavaka ny zavatra apetrakao.
Azonao atao ny manangana fampielezan-kevitra PR mankany:
Amporisiho ny vokatrao / fampiasa / serivisinao farany
Mametraha hevitra amin'ny tantara
Manolora fanomezana hevitra ho an'ny lahatsoratra ho avy
Satria olona be olona tokoa ny mpanao gazety sy ny tonian-dahatsoratra, azo antoka fa tsy maintsy manam-paharetana ianao ary mandefa mailaka fanaraha-maso.
Ny fananana fitaovana afaka mandeha ho azy ny fizotran'ny fanaraha-maso sy miteraka mailaka manokana miankina amin'ny fihetsiky ny mpandray dia ho mpanangona fotoana be tokoa. Fanampin'izay, tsy ho hadinonao mihitsy ny mailaka na ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery.
Ny marketing amin'ny mailaka ivelany (izany hoe ny fanitarana ny mailaka) dia afaka manohana ny paikadinao miditra ary manampy betsaka amin'ny tanjon'ny varotra ankapobeny.
Raha mbola tsy nataonao, ny paikady 4 noresahinay tato amin'ity lahatsoratra ity no toerana mety indrindra hanombohana amin'ny programa fitorianao. Fitaovam-piadiana fotsiny ny tenanao amin'ny fitaovana fanentanana mba hanaingoana, hanatsorana ary hanafainganana ny fizotrany ary ho vonona daholo ianao!
Tags: fanentanana mailakagrouphighmarketing marketingmailaka ivelanyoutreachpluspaikady fampiroboroboana